UPIPPA MIDDLETON UPHINDA WAVELA NOJAMES MATTHEWS EWIMBLEDON: IMIFANEKISO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UPippa Middleton uphinde waBuya nomyeni omtsha uJames Matthews eWimbledon: Jonga iifoto
UPippa Middleton kunye nomyeni wakhe uJames Matthews ngomhla weshumi elinanye kwi-Wimbledon Championships e-All England Lawn Tennis naseCroquet Club, eWimbledon. (Ifoto ngu-John Walton / PA Imifanekiso nge-Getty Izithombe)
Ngu: Esther Lee 07/14/2017 ngo-6: 12 PM
Ukuphumelela. Abantu abasandul 'ukutshata UPippa Middleton kwaye UJames Matthews bonwabele okunye ukuphuma ngolwesiHlanu, nge-14 kaJulayi, ngeli xesha bethatha uthando lwabo kwenye yeendawo zabo abazithandayo: iWimbledon.
Aba babini banxibe ngokungafanelekanga kumnyhadala wexesha lasehlotyeni kunye noMiddleton enxibe ilokhwe emhlophe eqaqambileyo kunye nomnqwazi wePanama ofanayo, owawulungelelanisa ngokugqibeleleyo ngokuchasene nehempe yomyeni wakhe eqhosha, igrey blazer kunye ne-navy tie.
Bobabini babonwa ngenzondelelo bevuya kumhlobo wabo, uRoger Federer, kwi-All England Lawn Tennis nakwiCroquet Club eWimbledon. (UFederer, kunye nenkosikazi yakhe uMirka, babezindwendwe kumtshato wesibini ngoMeyi.)
ILONDON, ENGLAND-JULY 14: UPippa Middleton kunye noJames Matthews babonwa kuSuku lwe-11 eWimbledon 2017 ngoJulayi 14, 2017 eLondon, eNgilane. (Ifoto ngu-HGL / GC Images)
Ngesinye isikhathi, uMiddleton ngothando wambamba isandla somyeni wakhe njengoko wayebonakala eqhekeza ihlaya. UMatthews ukwabonakala ukuba uncokola kamnandi nabalandeli abahleli ngasemva kwesi sibini.
UMiddleton, umthandi wentenetya ozinikeleyo, uye eWimbledon ngokulandelelana ukusukela ngo-2011. Imihla yakhe yokuma kwiimbaleki zetenisi zonyaka zibandakanya umama wakhe uCarole Middleton (ngo-2011 nango-2014), usisi omkhulu uKate (ngo-2012), owayeyinkwenkwe uNico Jackson ( Ngo-2013), umntakwabo James (ngo-2015, 2016 no-2017), kunye nomyeni wakhe wexesha elizayo uMatthews, owaqala ukwenza into kwitumente ngo-2016.
UPippa Middleton kunye nomyeni wakhe uJames Matthews bamqhwabela izandla uRoger Federer emva kokuphumelela kwakhe ngomhla weshumi elinanye kwi-Wimbledon Championships e-The All England Lawn Tennis naseCroquet Club, eWimbledon. (Ifoto ngu-John Walton / PA Imifanekiso nge-Getty Izithombe)
Umcwangcisi weqela noMatthews, olawula eyakhe ingxowa-mali yeheji, sele kumbovu ukuba basondele kwiinyanga ezimbini zomtshato. Njengoko kukhunjulwayo, iNkosana uGeorge kunye neNkosazana uCharlotte babengamalungu omtshato, ngelixa iiDuchess zaseCambridge uKate Middleton zincedisa ekuqhubeni inkqubo. Lo msitho walandelwa kukwamkelwa ngobunewunewu eCarole nakwikhaya elikufutshane likaMichael Middleton eBucklebury.
isinxibo esisesikweni sabasetyhini
izipho isikhumbuzo sokuyila isoka
ukucoca iringi ekhaya
butywala obungakanani umtshato ka-150
ukuba ujonge ntoni kumfoti wezithombe